dhiri: beatsx, kurova solo3 uye powerbeats3 zviri kutengeswa kusvika pamakumi matatu muzana kubva paapuro
Kuru Nhau & Ongororo Deal: BeatsX, Beats Solo3 uye Powerbeats3 zviri kutengeswa kusvika kusvika 30% kubviswa paApple
Deal: BeatsX, Beats Solo3 uye Powerbeats3 zviri kutengeswa kusvika kusvika 30% kubviswa paApple
Apple inopinda muBlack Chishanu fivha nezvibvumirano zvinoverengeka zvinoderedza mitengo pane mamwe mahedhifoni anotengeswa kuburikidza neayo epamhepo uye zvitoro. Matatu matatu mahedhifoni ave kutengeswa kuApple Chitoro, saka kana iwe & apos; wave uchivhima zvakanyanya pazvigadzirwa zveBeats, saka zvino ichave iri nguva yakanaka yekuzviongorora.
Kutanga kubva, isu tine mahedhiyo eBeatsX anozivikanwa, ayo anowanzo tengesa madhora zana nemakumi mashanu. Huye, Apple ikozvino inopa maearphones e $ 99 chete, saka iwe & apos; muchange muchichengetedza zvishoma kupfuura makumi mashanu emadhora kana mukatora mukana wechibvumirano.
Ipapo, isu tinayo maBeats Solo3 Wireless mahedhifoni, ayo Apple afunga kudzikisira ne $ 60 kuitira kuti vatengi vatenge peya ye $ 240 chete. Chekupedzisira asi chisiri chidiki, Apple inotengesa iyo Powerbeats3 Wireless kwe $ 160 chete, chaizvo $ 40 yakachipa pane zvakajairwa.
Kune avo vari kutsvaga kunyange zviri nani madhiri, Amazon inotengesa izvi zvishongedzo kune tad isingadhuri. Nekudaro, iwe unozokwanisa kuwana $ 50 dhisikaundi paBeatsX, $ 100 dhisikaundi paBeats Solo3 Wireless, uye, pakupedzisira, $ 66 dhisikaundi paPowerbeats3 Wireless.
chinyorwa: Apple ( AnorovaX , Inorova Solo3 Wireless , Powerbeats3 Wireless , Amazon ( AnorovaX , Inorova Solo3 Wireless , Powerbeats3 Wireless )
spigen Ultra yakasanganiswa iphone 12
dzima facebook messenger inzwi Android
software yakavakwa uye yakaunzwa kuita zvidimbu inozivikanwa se
Dzidza hunyengeri hwekugonesa yakavakirwa-mukati skrini yekurekodha yako Pixel foni
Chii chinonzi Clubhouse uye unowana sei kukokwa?